4.95m2 Maitiro eScandinavia, Iri Yekugezera Yevaviri Vaviri Iri Kunyanya Kushamisa Kupfuura Iyo Kamuri Yekugara!
musha / Blog / 4.95m2 Maitiro eScandinavia, Iri Yekugezera Yevaviri Vaviri Iri Kunyanya Kushamisa Kupfuura Iyo Kamuri Yekugara!
2020 / 10 / 15 kupatsanuraBlog 1027 0
Ou Xiaowei Bathroom Bhizinesi Chikoro
Pamba ndipo patinoda kuve veduwe, nemudiwa wepedyo, vabereki vanodikanwa, uye vana vakanakisa. Kumba, kwete chete fashoni kukosha, asiwo kudziya uye tembiricha.
Zvinoenderana nemamiriro chaiwo nezvinodiwa zvevaridzi, dhizaina Peng Huiyan anobva kuQuanzhou akasarudzika Santa Monica akateedzana akakodzera kune vechidiki uye vane fashoni mhuri kuti vagadzire
Dunhu: Kelleixiang Villa
Nzvimbo: anenge 4.95m2
Kurongeka: U-yakaumbwa dhizaini
Nzvimbo dzinoshanda: Nzvimbo yekuwachisa, yekugezera, inyore nzvimbo
Iyo dhizaini, Peng, yakagadzirirwa neiyo Scandinavia nyowani theme iyo inozivikanwa izvozvi. Mufashoni Morandi color scheme, yakadzika kuzadza kwegungwa bhuruu, grey grey, yakadzikama uye yakapfava. Mitsara yakapusa yemapaneti emasuo inopa iyo nzvimbo yakawanda yehunhu hwakaoma.
Sarudzo yemadziro idiki machena machena matiles, ane inodziya yero toni mataira anodziya, uyezve makore gumi haasi echinyakare nyore.
Kugeza nzvimbo uchishandisa girazi kabhoni + rakarembera pasi cabinet + rakaturika kabhineti musanganiswa, inzvimbo inovaka yekuvaka chikamu chechimbuzi chepamusoro kabhodhi + yakakwirira yakaturika kabhineti musanganiswa, musanganiswa wese wekubvumidzwa kwekugezera kuwedzera kupfuura 50%, kuti mhuri yese ive nenzvimbo yekuisa zvekugezera.
1, Iyo Wash Nzvimbo
Kune akagwinya muenzi, angave sei asina akasiyana siyana ekuchengetedza ganda uye zvigadzirwa zvekunaka. Mugadziri Peng akawedzera kugona kwegirazi uye yakagadzira nzvimbo yekuchengetedza-kupeta musuwo girazi kabati kuchengetedza zvigadzirwa zveganda uye zvigadzirwa zvekugadzira. Iyo runako mashiripiti yemwarikadzi inotanga neyemazuva ese chimbuzi uye ganda.
(Santa Monica PLWY19064 Unganidzo)
Ultra-yakatetepa dhizaini yetafura yepamusoro pombi ine tepi dema, black and white color scheme is the most classic, never out of fashion. High color value of the stage basin, let the whole countertop shape more artistic flavor, senior sense full. The countertop basin is easy to install, and it’s also very convenient to replace the style later.
Black iron is a hot net in the past few years, and a stylish home certainly can’t be without its embellishments. Gadzira pasi pegirazi kabati matte nhema simbi yekuchengetedza, kuita iyo fashoni pfungwa yeScandinavia dhizaini ive yakatanhamara.
Iyo inoenderana bhokisi rakarembera rinobviswa and can be adjusted according to the owner’s usual usage habits, and can be placed left or right.
Girazi iri rakapetwa nekaviri-musuwo wepakati-kureba kurembera kabhineti, iyo inogona kubata dzinoverengeka zvinhu uye inopatsanurwa mukati negirazi laminate, ichiita kuti iratidzike uye yakarongeka uye inokodzera kurongeka kwezuva nezuva.
Mugadziri Peng akasarudza iyi seti yekugezera kabhodhi dhizaini, kwete chete mukukosha kwechiso zvakanyanya kune chishuwo chevechidiki fashoni mhuri, in some of the details of the function is also very “careful”.
Pasi pebheseni iri semi-yakavanzwa dura rekuchengetedza, inowanzoita kunge ingori rakavhurika kabhineti, chero bedzi mudhirowa ukadhonzerwa kumagumo, iwe unowana nyika hombe kuseri kwekuvhiringidzika, nzvimbo ino yakanyatsokodzera kuisa zvimwe zvakavanzika zvinhu.
2, Yakanakira Nharaunda Mubairo
Yetsika yekugezera nzvimbo, kunze kwekureruka kweinenge isingaite imwe gadziriso yemabhokisi enyama, zvakareruka uye asina kuchena Dhizaini Peng akavaka iyi seti yekuchengetera kabhineti kutenderedza chimbuzi, hukuru hukuru, izere dhizaini yekugadzira, haigone kungo chengetedza chete, asiwo kutamba chinzvimbo chekushongedza, kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe chete.
Pazasi pebhodhi repadivi isherufu rakavhurika rinosvika mazana matatu emamirimita pakureba, izvo zvinoita kuti zvive nyore kusvika pasina kusimudza uye kukotama. Pamusoro pemataipi emapepa, ino nzvimbo inogona kubata zvinhu zvakawanda senge mbozhanhare, makiyi, aromatherapy, nezvimwe.
Iyo yepamusoro hafu yekabati yakavhurika ingori inofarirwa nevane hoarders yekuchengetera zvinhu zvakasara zvakadai semushonga wekuuraya utachiona, matauro emapepa, nezvimwe.
Kunge mhuri zhinji diki, varidzi vanotarisa pahunhu hwehupenyu, saka vanosarudza chimbuzi chakangwara. Zvichienzaniswa nechimbuzi chetsika, chimbuzi chakangwara ine chigaro chekudziya, geza mushure mechimbuzi uye mamwe mabasa, kuitira kuti nzira yekuchimbuzi iwedzere nyaradzo.
3, Kugeza Nzvimbo Mubairo
Kwavo shawa, ivo vakasarudza simbi yakasarudzika uye yakasimba dema. Matte nhema simbi ine madiki machena mataira, inogona kuve yakanyanya musanganiswa.
Misoro mitema yekugezera inonyanya kufarirwa nemhuri dzevechidiki, uye iyo nhema dema ine yekutanga kunzwa, ine rupo uye yakasimba, uye haizotarisike seyakare kwemakore.
Pakapfuura :: Kohler Anotora Inonyatso kuzivikanwa Smart Bathroom Kambani KuDare Kune Kupfuura $ 1.4 Mamirioni Mukukuvara Zvadaro: Iwo Akanakisa Bathroom Matipi Akambo, All Mune Imwe Nzvimbo!